मुख्यमन्त्री राईले भने- म रचना रिमाललाई वान साइड लभ गर्छु - News 88 Post
कला / मनाेरञ्जन मनाेरञ्जन राष्टिय
November 27, 2021 N88LeaveaComment on मुख्यमन्त्री राईले भने- म रचना रिमाललाई वान साइड लभ गर्छु
काठमाडाैं । प्रदेश १ मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले गायिका रचना रिमाललाई वान साइड लभ गरेको बताएर आफू नेपाली गीतसंगीतलाई माया गर्ने व्यक्ति रहेको जानकारी दिएका छन् ।
जान्नुहोस्, महिनावारी भएको कति दिनपछि सम्बन्ध राख्दा गर्भ बस्छ ?
को-को छन् त काँग्रेसमा मन्त्री बन्ने दौडमा ? गगन थापा बन्लान् ?
July 29, 2021 July 29, 2021 N88
बामदेवले अनौठो प्रस्ताव ल्याएपछि शोकसभा जस्तै बन्यो एमाले बैठक, के हाे त्याे प्रस्ताव
August 9, 2021 August 9, 2021 N88
फास्ट ट्रयाकको ठेक्का रद्द भएपछि प्रधानमन्त्री झनक्क रिसाए ओली
April 3, 2021 N88